Waan ognahay u ay jiraan boqollaal adeegyo martigelinaya annaga nala heli karo. Dhamaantoodna, qaar baa ka caansan kuwa kale waxayna ku dhajiyeen arrin soo socota.
Laakiin mid ka sred ah kuwa ugu caansan?
Waa hagaag, qodobkan waxaan eegeynaa laba arrimood oo aynu rumaysanahay u ay go’aamiyaan caansaanta shirkad martigelisay:
Waxyaabaha ku habboon warbaahinta bulshada, waxaan abuuray oo samaynay liis ay ku jiraan shirkadaha 100 martigelinaya oo dhan xisaabtan weyn ee loo yaqaan ‘proračunska tablica’. Ka dib, waxaanu barbar-dhigeynay shirkadaha martigeliyaha leh kuwa ugu badan ee la socda Google Trends is a arkaan inta jeer ee laga raadiyo Google.
1.5 9. Hosting InMotion
3 Miyay yihiin mareegaha caanka ah ee dadweynaha (na Media Media)?
Mawduucku wuxuu je imao iyo jeer ahaa qaabka dadka si ay uga caawiyaan go’aannada.
Ma dooneysaa inaad kabo cusub uhesho? Oznaka Nike ama Adidas.
Gadashada telefonon cusub? Waa iPhone ama Samsung.
Inkastoo caan-beelku noqon karo barometar wanaagsan oo wanaagsan xaaladaha qaarkood, maaha inay sheegto sheekada oo dhan oo ku saabsan tayada shirkadda iyo adeegyadeeda.
Ka baxsan 5 ugu sarreeya magacyada martigelinta ugu caansan liiskayaga – kan kelija ee aan si prilagodi ugu talin karno halkan WHSR waa SiteGround – oo waxay ahaayeen mayl masaafo magla u jirta # 1 GoDaddy.
SiteGround waxaa laga yaabaa inaanay ahayn magac qoys laakiin waxay si joogta ah u dhistay sumcaddooda sida adeeg bixiye tayo leh. Jerry Low ayaa adeegsanaya adeegyadooda martigelintiisa blog shakhsiyeed kaas oo ku hadlaaya xaddiga sida ay u wanaagsan yihiin.
Laakiin marka la eego warbaahinta bulshada ka dib, SiteGround ma aha mid la xariira ku saabsan taageerayaasha Twitter 231.000 iyo followers 30.593 na Facebooku
Sidoo kale GoDaddy, Name.com waxaa laga yaabaa inaanay noqon shirkadda aad ka fekereyso marka ay timaado adeegyada martigelinta. Laakiin, shirkadda diiwaan-qoraha domena vosak bixisaa tiro qorshayaal martigalin ah oo ay ku daraan adeegyada domainka.
Marka ay timaado warbaahinta bulshada, Name.com waxay ku soo jiidataa taageerayaal 553,000 oo ku saabsan xisaabteeda Twitter. Si kastaba ha ahaatee, xisaabta Facebook, si kastaba ha ahaatee, si fiican um dulqaadanin kuwa 48.464 oo keliya.
Inkasta oo uu yahay hogaamiye ganacsi marka la eego xawaaraha lagu rarayo, A2Hosting qasab ma aha u ay ku amarto joogitaanka warbaahinta bulshada. Twitter-ka, waxay heystaan ​​oo keliya 102,000 waxayna maamulaan waxoogaa ka fiican bogga Facebook iyo 49,233.
Sida InMotion Hosting, voxaan ku qiimeynay Kinsta aad u sareysa marka la barbar dhigo shirkadaha kale ee WordPress. Laakiin adeegyadooda aad u fiican waxay ka caawiyaan ciyaarta cayaaraha bulshada? Sida muuqata ma ahan, maadaama ay haystaan ​​126,000 Twitter iyo waxoogaa qiimo yar oo ka fiican InMotion ee Facebook la socota taageerayaasha 19,153.
Marka ay caan ku tahay internetka, warbaahinta bulshada waa mid ka mid ah kala badh isle’eg. Qeybta kale ee aan u baahannahay inaan eegno waa iyada oo loo marayo Google Trends.
Iyadoo la adeegsanayo garaafka "Vrijeme kamate", waxaanu heleynaa fikrad ah sida loo jecel yahay iyo inta jeer ee marxaladda qaarkood (ama shirkada) loo isticmaalo mashiinka raadinta wakhti cayiman.
Inkastoo GoDaddy i si cad u haysato warbaahinta bulshada ee ugu wayn ka sred ah kuwa aan kor ku taxnay, waxay sidoo kale leeyihiin saamiga ugu weyn suuqa ee Google Trends?
Ako želite napasti GoDaddy, Hostgator, Bluehost, SiteGround, i DreamHost. GoDaddy si fudud ayaa loo xayiray dhammaantood iyaga oo si joogto ah ugu haray 75 ilaa dhibcaha 100 ee caan ka ahaa bishii Studeni.
Iyada oo InMotion, Kinsta, WPEngine, iyo A2Hosting, GoDaddy waliay wayay haystaan ​​hogaamiye wayn.
Xaqiiqdii, InMotion hosting, Kinsta, A2Hosting iyo WPEngine ayaa sidoo kale ka hooseeya marka loo eego Hostgator, Bluehost, SiteGround, iyo DreamHost.
Miyay yihiin mareegaha caanka ah ee dadweynaha (na Media Media)?
Marka la eego baaritaankeena iyo dib u eegista, GoDaddy waa u fiican dadka doonaya leedahay blog ama sahar fudud. Ako ne želite, možete se obratiti na WordPress ama dukaanka eCommerce, martigeliyayaasha bixiya sida Kinsta ili InMotion Hosting, koji će se pretvoriti u servicu iiganta i mariegalinta..
Dhammaadka maalinta, waa wax walba oo aad rabto oo aad u baahatid website-kaaga sida shirkadaha martigelinta kala duwan ee u baahan baahida bogga ee kala duwan. Haddii aad tahay blog fudud, markaas waxaa laga yaabaa in GoDaddy ay ka badan tahay ku filan. Ma u baahan tahay khayraad badan oo server ah? Waxaa laga yaabaa inayi fiican tahay inaad u tagto Kinsta ama InMotion Hosting.